iOS 14 inobvumidza kuendesa wechitatu-bato mapikicha uye ichaenderana neAliPay | IPhone nhau
Kuburitswa kweshanduro yekutanga yeIOS 14 kwavhura kurambidzwa kwenhau dzisati dzakwana dzeApple sisitimu nyowani yekushandisa iyo ichaunzwa muzhizha regore rino. Nezuro isu tanga tichitaura nezve zvingaita nyowani yepamusoro-yekupedzisira mahedhifoni kubva kuBig Apple uye maawa mashoma apfuura pakange paine kuwanikwa kweiyo iPhone 9, iyo AirTag uye nyowani Apple TV iri kure. Nekudaro, izvozvi zvave kuwanikwa kuti iOS 14 inobvumira kupinza mifananidzo yechitatu mapato, Apple Pay ichaitwa inoenderana ne AliPay. Ivo zvakare vabuda nhau nezvekuwanika maficha. Dzese idzi nhau mushure mekusvetuka.
Kuwanika kwekuwanika uye nhau muApple Pay mukudonha kweiyo iOS 14
Iyo yekutanga ruzivo iri muchikamu che wallpapers. Iyo kodhi kodhi inoratidza kuti Apple ichatanga kuronga iyo wallpapers muzvikamu zvakasiyana: Mapuraneti, Maruva, Mahara, nezvimwe. Nenzira iyi, inoitirwa kuchengetedza sangano mukati mayo marongero. Uye zvakare, zvinoratidza kuti yaizobvumidza yechitatu-bato mapikicha kupinda kune iyo iPhone pachayo. Saka chingave chitsva chakakura sezvo ichi chikamu chave chimwe chezvinonyanya kudzvinyirira naApple kubva pakauya iOS.
Kune rimwe divi, zvakawanikwa kuti mukati mekushandisa kweMifananidzo, chero mushandisi iwe unogona kuendesa ako mafoto kumakakatanwa akasiyana ayo Apple akatanga, nenzira yemakwikwi. Isu tatova nemimwe mienzaniso senge Shot pa iPhone (mune vhidhiyo kana pikicha vhezheni). Iyi nzira yekugadzira nharaunda yaizobvumira vashandisi kumira kunze kwavo kwehunyanzvi basa vachishandisa Apple Hardware.
Beyond kunyorera, zvakawanikwa kuti iOS 14 yaizobvumidza kusangana kweAliPay, iyo Chinese yekubhadhara system, iine Apple Pay. Kugumisira asi kusiri kupedzisira, nhau dzekuwanika yaizowedzera sezvazviri mune yega yeakanyanya makuru eIOS. Iyo inoshanda sisitimu inogona kukwanisa kushandura maacoustic masayiti kuita zviziviso zvakaita sekugogodza pamusuwo, alarm, kuchema kwemwana ... nenzira iyi, avo vane hurema hwekunzwa vanogona kugamuchira ruzivo kubva kunze vasingakwanise kunyatsoziva chii chirikuitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » iOS 14 inobvumidza kuendesa wechitatu-bato mapikicha uye ichaenderana neAliPay
Powerbeats 4: Iyo bhatiri ichave yako yakasimba poindi